Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူ ၃ ချက်ကို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမှာထည့်ဖို့ အစိုးရသဘောတူ ( RFA )
ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူ ၃ ချက်ကို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမှာထည့်ဖို့ အစိုးရသဘောတူ ( RFA )
at 5/22/2014 08:22:00 PM
ဒီမိုကရေစီ၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို ထဲ.သွင်းဆွေးနွေးရန်
ဗမာအစိုးရကသဘောတူ။ ဒါပေမဲ. ဖယ်ဒရယ် ဆိုတဲ.စကားမပြောရ။ NCCT ကသဘောတူ။
ဖယ်ဒရယ်ဘဲခေါ်ခေါ်အန္ဒရယ်ဘဲခေါ်ခေါ် ခေါ်ချင်တာခေါ်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရဖို.အရေးကြီးတယ်။
Kawl Cozah Ralkap nih an cohlan kholo mi Federal phung an cohlan cang!!!!!!!
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတဲ့ ဖက်ဒရယ်ရဲ့ အခြေခံမူတွေကို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမူကြမ်းမှာ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးဖို့ အစိုးရဘက်က လက်ခံလိုက်ကြောင်း တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက ပြောပါတယ်။
"အထူးသဖြင့်က အခြေခံမူနဲ့ ပတ်သက်တယ်၊ ဟိုတခါတုန်းက သူတို့က ဖက်ဒရယ်မူကို လက်မခံဘူး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ဆိုတာ မသုံးပါနဲ့လို့ပြောတယ်၊ အခု ကျနော်တို့က ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသုံးသော်လည်း ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားက ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ၃ ခုစလုံးကို ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူ ၃ ခုစလုံးကို ထည့်ပေးပါတယ်၊ ဒီမိုကရေစီ၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို ထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒါအင်မတန်မှ တိုးတက်တဲ့လက္ခာလို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်"
ဒီနေ့ ဆွေးနွေးပွဲကို အစိုးရဘက်က ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သက်နိုင်ဝင်း၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင် ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၊ ဒေါက်တာ ဆလိုင်းလျှံမုန်းဆာခေါင်း၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာစတဲ့ နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲဟာ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့အတွက် ဒုတိယမြောက် မူကြမ်းတစ်ခုရအောင် ကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် သြဂုတ်လမတိုင်ခင် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ကျင်းပနိုင်မယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။